နှုတ်ဆက်စကား တာ့တာ ဆိုတာ မွေးစားစာလုံးလား မြန်မာအဓိပ္ပါယ်ရှိလား သိချင်ပါတယ်ဗျ ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေပေးစေလိုပါတယ် တာ့တာကို ဘယ်ကနေလာသလဲ လိုက်ရှာရင် အိန္ဒိယကလို့ ဖြေထားတာတွေ တွေ့ပါမယ်။ အရင်းအမြစ်က ဗြိတိသျှ အင်္ဂလိပ်စကားဖြစ်ပါသတဲ့။ ကလေးချော့သီချင်းထဲမှာ ဂွတ်ဘိုင် အစား တာ့တာလို့ သုံးလာတာ ၁၈၂၃ ကတည်းကလို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီစာလုံးက အီတလီနဲ့ လက်တင်လို ဒက်ဒီတဲ့။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၂၅-၅-၂၀၂၀
၁။ ဆရာ ဖြင့် / ဖြစ် အသုံး ရှင်းပြပေးပါ။ ၂။ မင်္ဂလာပါဆရာခင်ဗျား ဖြစ် နှင့် ဖြင့် ရဲ့ကွဲပြားမှုလေး၊ သုံးပြုပုံလေးကို သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ စသည်ဖြစ် စသည်ဖြင့် ဆရာခင်ဗျာ ဖြစ် နဲ့ ဖြင့် အသုံးပြုပုံသိပါရစေ။ ဖြင့်နဲ့ ဖြစ်က အတော်ကိုကွာခြားတယ်။ ဖြစ် ခဏဖြစ်ဖြစ် တယောက်ဖြစ်ဖြစ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မသွားဖြစ် ဖြစ်ကတတ်ဆန်း ဖြစ်ခဲ ဖြစ်စဉ် ဖြစ်စဉ်ပြန်တမ်း ဖြစ်ဆန်းကာ ဖြစ်ထကျင်သ = ဖြစ်ထကျင်သော ဖြစ်ထွန်း ဖြစ်ပုံ ပျက်ပုံ ဖြစ်မှ ဖြစ်ရပလေ ဖြစ်မှ ဖြစ်ရသေး ဖြစ်မြဲ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် ဖြစ်လွယ် ဖြစ်လျှင်ကောင့် = ဖြစ်လျှင်မူကား ဖြစ်ထွေ ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင် သွားလာဖြစ်အောင် အဖြစ်အပျက် နေထိုင်မဖြစ် ရှေ့ဖြစ် နောက်ဖြစ် ဖြင့် ငါ့မှာဖြင့် စကားဖြင့် စာအားဖြင့် တုံးသောလက်နက်ဖြင့် မျက်စိဖြင့် ပြူမူသဖြင့် ဖြင့်ဖြူး ဖြင့်ပြော လက်ဖြင့် လျှာဖြင့် သူ့ကိုဖြင့် သူ့မှာဖြင့် ဟုသဖြင့် အထူးသဖြင့် အားဖြင့် တွေ့လျှင်ဖြင့် မေတ္တာဖြင့် ခြေထောက်ဖြင့် ပြောသဖြင့် သေနတ်ဖြင့် နှုတ်အားဖြင့် ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၂၅-၅-၂၀၁၉
ရာမာယဏဇာတ်ကို ကိုးကားတင်ပြပြီး ဆက်ရေးပါရစေ။ ဦးတိုးရေးတဲ့ ရာမရကန်ကို ဆယ်တန်းမှာ စသိပါတယ်။ နောက် ဝင်းဦးဆိုတဲ့သီချင်း နားထောင်ဖူးတယ်။ ပို့စ်တခု တွေ့ပါတယ်။ ရာမ-သီတာ လက်ထပ်ခန်းနှင့် အယုဒ္ဓယ ပြည်ပြန်တော်ခန်း။ လောင်ပန်း၊ လောင်းပန်ကို ဆွေးနွေးထားတယ်။ ကျွန်တော့မျက်စိမြင်မိတာက လောင်းရိပ်ကျနေတဲ့ မြန်မာစာသတ်ပုံ။ စိမ့်ကြီးမြိုင်ကြီး၊ ရိပ်ကြီးတောတောင်၊ နေရောင်မခံ၊ ပန်းပျံပင်ဆင့်၊ မြေနှင့်ရန်ဖက်၊ ခက်လက်စိမ်းမြ၊ မိုးမခဘူး၊ နွေလသန်ပေါက်၊ ယဉ်ချိန်ရောက်ခါမှ၊ နှင်းသောက်ကယ်ရွှင်ရွှင်၊ ပွင့်ဖူးတွေဆင်ကြသည်၊ ရွှေပင်ဆင့်ငွေပင်ဆင့်၊ ပတ္တမြားပင်ဆင့်၊ ဂမုန်းအင့်အဖက်၊ ဆောင်းစက်ရိပ်ခို၊ ရေတွက်လို့ဆိုတော့မည်။ လက်တံတိုတမည်၊ လက်တံရှည်နှင့်၊ နေရောင်ခြည် လရောင်ဝါ၊ မိုးလုံးပြာ မိုးလုံးမှိုင်း၊ ပုလဲဆိုင်း ပုလဲနှစ်၊ ချစ်စရာ့လိပ်ပြာတောင်၊ နီလာရောင်တောင်လုံးမြိုင်၊ သုံးပွင့်ဆိုင်ခိုင်လုံးဆန်း၊ ပင်လုံးလန်းနွဲတန်းယိမ်း၊ ညှာတံစိမ်းများတို့၊ လေသိမ်းတိုင်းလှ၊ ကိန္နရီကသည့်နှယ်။ တချို့ကနီပြာပြာ၊ တချို့ကဖြူဝါဝါ၊ တချို့မှာချိပ်ပွင့်၊ တချို့မှာပန်းရင့်ကို၊ ပင်ဆင့်ပန်းပျံ၊ ဘွဲ့မည်ရည်ခံချင်းတွင်၊ ဝေယန်နန်းမြင့်၊ ပန်တိုင်းတင့်မို့၊ မြို
ဆရာခင်ဗျား မြန်မာစာမှာ frame ကို ဘာကြောင့် ဘောင်လို့ မရေးရဘဲ ပေါင်လို့ ရေးရသလဲ။ ပေါင်က thigh ရှိနေသားနဲ့။ ဇီးဖျော်ရည် သောက်မလားကို စာနဲ့ ဆီးဖျော်ရည်သောက်မလားမေးရင် ဂွဘဲ။ သတ်ပုံဆိုတာ လူပညာရှင်တွေ သတ်မှတ်တာမို့ မမှားနိုင်ဘူးလားခင်ဗျား အင်္ဂလိပ်လို ဖရိမ် ကို ဘောင်လို့ရေးမှသာ မှန်တယ်။ အင်္ဂလိပ်လို သိုင်း က ပေါင်မှန်တယ်။ ဆီး ကတော့ ဂွကျတာ အမှန်ပဲ။ ဆီး ကိုယ်ဝန်ရှိတာသိချင်ပါက ဆီးစစ်ပါ ဆီးကုန်းမြို့ ဆီးခုံက နာတယ် ဆီးချုပ်နေပါသလား ဆီးချိုရောဂါ စစ်ထားပါ ဆီးချူပေးမယ် ဆီးစပ် (ဆီးစ) ဆီးစပ်မှာ အလုံးရှိနေတယ် ဆီးတန့်ထားလို့ ဆက်သွားမရပါ ဆီးတားပိတ်ပင် ဆီးပန်းနီဆရာတော် ဆီးကြိုသည် ဆီးဖြူသီးစားမလား ဆီးဝမ်းလေ မှန်ပါသလား ဆီးသီးကောင်းကောင်းစားချင်တယ် ဆီးအောင့် ဆီးနှင်းတွေ ကျနေတယ် တားဆီး ပိတ်ပင်ထားသည် တားဆီးကံမြစ် ထုပ်ဆီးတိုးကစားခြင်း ပုဆိုးဆီး ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင် ဖျက်ဆီးပစ်သည် လူဆိုးကို ဖမ်းဆီးပါ ဧည့်သည်ကို ဆီးကြိုပါ ဇီး ဇီးကပ်သည် (ကိုယ်ဝန်ရှိသည်) ဇီးကွက်မျက်ပြူး ဇီးရှိသည် (ကိုယ်ဝန်ရှိသည်) ဇီးလျှောသည် (ကိုယ်ဝန်ပျက်သည်) ပေါင် အုန်းပေါင်မြို့ ပေါင်ချန် (ပေါင်ခြံ) ပေါင်တံရိုး ပေါင်ချိန် ပေါင်မုံ့ အပေါင်ဆိုင် ဘောင်
Macrocytic Anemia မက်ခရိုဆစ်တစ် သွေးအားနည်းရောဂါ
မင်္ဂလာပါဆရာ ကျွန်တော့်အသက် ၂၆ ပါဆရာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃လလောက်က ကျနော်မိသားစုကျန်းမာရေးကြောင့် ကျနော်အိပ်ရေးပျက် အစားပျက်တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆရာ ခုကျနော်နည်းနည်းလေး လှုပ်တာနဲ့ နှလုံးအရမ်းတုန်လို့ သွေးသွားစစ်ကြည့်တော့ သွေးအဖြေရခဲ့ပါတယ်ဆရာ အဖြေကိုဆရာ့ဆီပို့ပီး ဘာဆတ်လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာညွန်ပြပေးပါဦးဆရာ သွေးအဖြေပါဆရာ - Anemia - Macrocytosis - Thrombocytopenia Thrombocytopenia သွေးမှုံအရေအတွက် နည်းနေခြင်း https://dr-tint-swe.blogspot.com/2021/01/thrombocytopenia.html Anemia သွေးအားနည်းရောဂါ https://dr-tint-swe.blogspot.com/2021/09/anemia.html Vitamin B12 ဗီတာမင် ဘီ ၁၂ https://dr-tint-swe.blogspot.com/2021/06/vitamin-b12.html Macrocytic Anemia https://www.healthline.com/health/macrocytic-anemia Treating macrocytic anemia Treatment for macrocytic anemia focuses on treating the cause of the condition. The first line of treatment for many people is correcting nutrient deficiencies. This can be done with supplements or foods like spinach and red meat. You may be able to take supplements that include folate and
မြန်မာစာ အဘယ်ကြောင့် မှားနေကြသနည်း
၁။ မရေးတတ်တူတူ ရောချသလားထင်ရပါတယ် ၂။ အလွယ်နဲ့အမြန်ရေးကြလို့ပါ အဲလိုကောက်ချက်တွေက နည်းနည်းလေးသာမှန်ကြောင်း အထောက်အထားတွေနဲ့ တင်ပြထားပါတယ်။ အရင်တခါ အကြောင်းတရား ဆယ်ပါးတင်ပြထားတယ်။ ထပ်တိုးရဦးမယ်။ ၁။ ပညာရေးကို အားမပေးတော့ခြင်း ၂။ မြန်မာစာ ဦးစားပေးမခံရတော့ခြင်း ၃။ မြန်မာစာအဖွဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်ခံရခြင်း။ ၄။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်စက်တင်္ဘာလထုတ် မြန်မာအဘိဓာန်ကစပြီ အမှားတွေပါလာခြင်း။ ၅။ နဝတ ဆင်ဆာအဖွဲ့က သတ်မှတ်ထားတဲ့သတ်ပုံမဟုတ်ရင် ထုတ်ဝေခွင့်မပေးခဲ့ခြင်း။ ၆။ ပေါ်လစီအရ လျှာရှည်ပြီးပြင်ထားတာကိုသာ သင်ပေးနေခြင်း။ ၇။ ပြန်ထုတ်စာအုပ်တွေမှာ မူရင်းသတ်ပုံမှန်တွေကို မှားအောင်ပြင်ရေး ထုတ်ဝေနေကြခြင်း။ ၈။ ဒေါင်းလုဒ်စာအုပ်တွေမှာ မူရင်းသတ်ပုံမှန်တွေကို မှားအောင်ပြင်ရေးနေကြခြင်း။ ၉။ ဘယ်လိုရေးရေး ရတယ်လို့ ထင်မှတ်နေကြခြင်း။ ၁၀။ စာနဲ့ စကား ကွဲပြားအောင် မသိကြခြင်း။ အထင်နဲ့ အလွယ်တကူ ကောက်ချက်ချတာတွေ နည်းနည်းလေးသာ မှန်ပါတယ်။ ၁။ အတန်းစာနည်းလို့ထင်တာ မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်က မေးခွန်းမှားရေးသူတွေရဲ့ နောက်ခံအကြောင်းအချက်တချို့ကို သိတယ်။ ၂။ တိုင်းရင်းသားထင်တာ မဟုတ်ပါ။ တိုင်းရင်းသားတွေထဲမှာ မြန်မာစာ တော်တည့် မှန်ကန်အောင်ရေးသူတွေကို သိတယ်။ တ
ဖဆပလ ခေတ်က သတင်းစာအရေးအသား
- တံတားအောက် ကားမှောံကျပုံ - အမျိုးသ္မီးတဦး ရှေ့သွား ၂ ချောင်းကျွတ်သွားပြီ - ပြည်ထောင်စုနေ့စဉ် - အဖြတ်ကြမ်းလှသော နကရဖ - တနှစ်အတွင်း ၄ ကုဋေကျော်ဖြတ်ခဲ့ခြင်း - တသောင်းဘိုး ဖေါက်ပြီးခိုးပြန်ပြီ ပုံများ Maung Maung Cartoon ကျေးဇူး။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ